एभरेष्ट ग्रुपको नेतृत्वमा सैपाल ग्याँसको विक्रि वितरण शुरु - Aarthiknews
काठमाडौं । सैपाल ग्याँस प्रा.लिको उत्पादन तथा बिक्रि–वितरण शुरु भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको स्वामित्वमा रहेको सैपाल ग्याँस शिवप्रसाद घिमिरेले केहि हप्तामात्रै खरिद गरेका थिए । आयल निगमबाट करिब ३ महिनाअघि मात्रै सञ्चालन स्वीकृति पाएको सैपाल ग्याँस आर्थिक संकटमा फसेपछि मन्त्री भट्टले विक्रि गरेका थिए ।
मन्त्री भट्टकी श्रीमती निर्मलादेवी भट्ट अध्यक्ष रहेको प्रालिमा गोपालबहादुर शाही, मानबहादुर शाही, दिनेश साह र सिद्धराज ओझा सञ्चालक रहेका थिए । १८ करोड एभरेष्ट ग्रुपका सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेले खरिद गरेका हुन । एनसीसी बैंकमा सैपालको करिब ९ करोड ऋण थियो । बजारमा समेत गरि कम्पनीको १२ करोड ऋण थियो ।
बिहीबार सैपाल ग्यासलाई पुन बजारमा विक्रि वितरणको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'खाना पकाउने एल.पी. ग्याँसको खपत वार्षिक करिब चार लाख ३० हजार मेट्रिकटन रहँदै आएको छ । विगत ५१ वर्षदेखि एल.पी. ग्याँस नेपालमा प्रचलनमा रहेता पनि त्यस समयमा यो हुनेखाने वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने बस्तुको रुपमा थियो भने आज प्रत्येक नेपाली चुह्लो एल.पी. ग्याँससँग जोडिन आँतुर छन् ।'
प्रत्येक महिना करिब २७ लाख सिलिन्डर खपत हुने गर्दछ अर्थात बार्षिक करिब ४० अर्बभन्दा धेरैको कारोबार हुने गरेको उनले बताए । एल.पी. ग्याँसको खपत वार्षिक २० प्रतिशतले बढिरहेको छ । पूर्व मेचिदेखि कैलालीसम्म यस उद्योगसमेत ६१ औँ उद्योगका रुपमा यो सैपाल ग्याँस उद्योग रहेको उनले जानकारी दिए ।सैपालका करिब सवा करोड सिलिन्डर रहेको र जसमध्ये सबैभन्दा कम ग्याँस उद्योग नेपालमा रहेको प्रदेश भनेकै सुदूरपश्चिम प्रदेश हो भने ग्याँस उद्योग नै नभएको प्रदेश कर्णाली रहेको उनले बताए ।
उनले भने, 'एभरेष्ट ग्याँस गु्रपसँग हाल सञ्चालनमा रहेका काठमाडौँ उपत्यकासमेत ६ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब १७ लाख सिलिन्डर बजारीकरण गरिएका छन् । यस ग्रुपले प्रत्येक महिना करिब चार लाख सिलिन्डर उत्पादन र बिक्रि–वितरण गर्दै आएको छ ।'
अत्याधुनिक यूरोपियन प्रविधियुक्त सैपाल ग्याँस उद्योगले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ गरी तीन वटै प्रदेशमा डिलरका माध्यमबाट उपभोक्ताको भान्सासम्म सेवामुखी व्यवसाय गर्दै जाने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
करिब ३ महिनामा विशाल बजार कम्पनीको शेयर कारोबार फुकुवा